mercredi, 05 décembre 2018 18:06
Famotsoran-keloka: Fangatahana miisa 36 no voarain'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy
Ankoatra ireo 36 mangataka "amnistie" na.famotsoran-keloka ireo dia miisa 1300 eo koa ireo fangatahana fanonerana (réparation) noho ny raharaha nitranga teto Madagasikara hatramin'ny 2001 no mankaty.
mercredi, 05 décembre 2018 16:52
Fifidianana filoham-pirenena: Ho tonga amin'ny 8 desambra ireo bileta tokana
Hivantana avy hatrany amina tanàna enina, Antsiranana, Sambava, Mahajanga, Toliara, Tolagnaro ary Antananarivo ireo bileta tokana avy natonta tatsy Afrika Atsimo, sy ireo taratasy fitanana an-tsoratra hampiasaina amin'ny fihodinana faharoa.
Halefa eny amin'ny Distrika avy hatrany, ary ny tompon'andraikitry ny CENI eny anivon'ny Distrika no mandefa ireo fitaovana ireo hatreny amin'ny birao fandatsaham-bato, araka ny fanazavan'ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo.
mercredi, 05 décembre 2018 13:50
Fandriampahalemana: 80 lahy ny mpitandro ny filaminana nahetsika
Hanatanteraka "opération" ato amin'ny faritra arovana Menabe manomboka androany, ary haharitra 10 andro.
Ny ONG Fanamby no miantoka ny lany rehetra amin'izany.
mercredi, 05 décembre 2018 11:25
Solika: Niaka-bidy nanomboka omaly hariva
50 Ariary isaky ny litatra ny fiakarany.